A kpọrọ IMEX maka Nomination Award New Award Industry
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Awards » A kpọrọ IMEX maka Nomination Award New Award Industry
Akụkọ mkpakọrịta • Awards • Njem azụmahịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Ndị otu IMEX
Ihe ngosi akụkọ ngosi ga -ewere ọnọdụ n'ime ụbọchị abụọ na Julaị 2, 30, na -amata ịdị mma na ngalaba ahụ, IMEX weghara aha nhọpụta abụọ.
Ndị edepụtara aha bụ ndị otu IMEX Operations maka Best Ops Team na PlanetIMEX maka Best One-off ma ọ bụ Series of Virtual Events, ụdị ọhụrụ maka afọ a.
Ihe nrite EN na -abịa n'oge ma dị mkpa - na -egosipụta oke ngosipụta, agụụ na ntinye nke ndị ọkachamara ihe omume gosipụtara.
A na -ekpe ikpe site na ụfọdụ ndị ọkachamara ihe omume UK kacha elu site na ebe egwuregwu, ndị nhazi na ụlọ ọrụ.
Ihe mmemme 2020 & 2021 EN Awards ga -eme na Evolution London, Battersea Park, malite na 6:00 mgbede. Ndị edepụtara aha bụ ndị otu IMEX Operations maka Best Ops Team na PlanetIMEX maka Best One-off ma ọ bụ Series of Virtual Events, ụdị ọhụrụ maka afọ a.
Carina Bauer, onye isi ụlọ ọrụ kọwara, “Anyị nwere obi ụtọ maka nnabata ụlọ ọrụ mba a otu IMEX. “Ndị otu anyị Ops bụ ezigbo ụlọ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke ịmepụta ihe ngosi azụmahịa dị egwu, ha na ndị mmekọ ụlọ ọrụ anyị na Las Vegas na-arụkọ ọrụ ugbu a iji nye IMEX America ihe na-atọ ụtọ.
“Anyị nwekwara nganga na a họpụtara PlanetIMEX, nzaghachi anyị na ime obodo maka ọnọdụ pụrụ iche nke 2020, na ngalaba ihe omume mebere.
“Ihe nrite EN na -abịa n'oge ma dị mkpa - na -egosi oke ihe ọhụrụ, agụụ na nkwa nke ndị ọkachamara ihe omume gosipụtara ka ụlọ ọrụ ahụ na -aga n'ihu ọnụ. Nyere na IMEX America na Nọvemba ga -abụ mbipụta anyị nke iri, nhọpụta ndị a na -enye anyị ọtụtụ ihe kpatara anyị ga -eji mee ememme. ”
A na -ekpe ikpe onyinye ụlọ ọrụ mba a site na ụfọdụ ndị ọkachamara ihe omume UK kacha elu site na ebe egwuregwu, ndị nhazi na ụlọ ọrụ. Ndị ikpe bụ: